Oniversite Mozambikàna Roa Mandràra Ny Zipo Fohy sy ny Volo Rasta · Global Voices teny Malagasy
Namoaka ny lisitr'ireo zavatra voaràra ao amin'ny toeram-pampianarana ny Oniversitem-Pampianarana ao Beira
Voadika ny 19 Avrily 2017 17:28 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Español, Français, polski, Português
Vehivavy mijery lahatsary fanolorana tao amin'ny Sekolin'ny Fifandraisana sy ny Zava-kanto tao amin'ny oniversite Eduardo Mondlane, ao Maputo, Mozambika tamin'ny taona 2012. Sary avy amin'ilay mpisera Flickr, cassimano. CC BY-NC-ND 2.0
Niteraka adihevitra mafana tao amin'ny media sosialy ireo oniversitem-panjakana Mozambikàna roa ao an-tanànan'i Beira rehefa nanambara ny fitsipika vaovaon'ny ny fitafiana ho an'ny mpianatra sy ny mpampianatra.
Ny lisitry ny fitafiana sy endrim-bolo voaràra ho an'ny lehilahy dia ny volo lava, mirandrana, rasta, ary ny pataloha fohy (short). Ho an'ny vehivavy kosa, voaràra ankehitriny ny manao zipo fohy, pataloha tery, akanjo manify sy “lobaka mampiseho nono”. Voaràra ho an'ny lahy sy ny vavy ny flip-flop.
Nalaina sary sy nozarain'i Zenaida Machado, mpikaroka ao amin'ny Mpanaramaso ny Zon'olombelona (HRW) ho an'i Mozambika tao amin'ny Twitter ny filazan'ny UniZambeze tamin'ny 28 Martsa.
Ny oniversite ao avaratr'i Mozambika dia mandràra ny mpianatra tsy hanao rasta, kapa, pataloha fohy sy fitaifiana tery.
Voalaza fa nametraka fitsipika fitafiana tahaka izany ihany koa ny Oniversitem-Pampianarana (Universidade Pedagógica amin'ny teny Portiogey), izay nalaina sary sy nozaraina tao amin'ny Twitter ihany koa, saingy miampy ny fandraràna sigara sy labiera ny azy ireo.
Namoaka lisitr'ireo zavatra voaràra ao amin'ny toeram-pampianarana ny Oniversitem-Pampianarana ao Beira
Tsy vao sambany ity karazana adihevitra ity no nitranga tao Mozambika. Tamin'ny volana Marsa tamin'ny herintaona, nankatò fanapahan-kevitra mandràra ny zipo fohy eny amin'ny sekoly ambaratonga faharoa fototra ny Minisiteran'ny Fanabeazana sy ny Fampandrosoana ny Maha Olombelona. Niteraka fihetsiketsehana tao Maputo renivohitra ny fanapahan-kevitra ary niteraka disadisa ara-diplaomatika tamin'i Espaina raha voasambotra nandritra ny fihetsiketsehana ny mpikatroka Espaniola iray ary nampodian'ny manampahefana avy eo.
Tahaka ny farany teo, maro ireo niditra tao amin'ny media sosialy mba haneho ny fahatezeran'izy ireo noho ny fanapahan-kevitra.
Mauro Steinmay, mpanakanto lava volo, nilaza fa mikasika ny oniversite, tsy zaza intsony ny mpianatra, ary tokony tsy hanaiky ity karazana fanerena ity izy ireo:
Mino aho fa tsy tokony hanahy momba ireo oniversite te handràra ny volo rasta sy ny hafa isika. Raha manaraka ireo fitsipika ireo ny mpianatra, dia satria tsy manam-pahasahiana hampanaja ny zon'izy ireo, ary mendrika ho azy ireo ny oniversite ianarany. Olan-dry zareo izany. Tsy misy ankizy mianatra any amin'ny onivesite.
Tamin'ny lahatsoratra niparitaka be, nilaza ilay mpikaroka, Benedito Memidji fa efa tamin'ny fanjakana sosialista tamin'ny vanim-potoanan'ny ady mangatsiaka ireo fitsipika ara-pitafiana ireo. Niresaka vanim-potoana tamin'ny taona 1979 tahaka izany, izay fantany nandritra ny karoka nataony tao amin'ny arisivam-pirenena ihany koa ny lahatsorany, izay nozarain'ilay mpanao gazety Rafael Ricado Machaela, Nahitana lahateny avy amin'ny filoha Samora Machel izay miampanga ny zipo fohy sy “mandrisika ny olona mba hiady amin'ireo lamaody ireo” ny lahatsoratra:
Ny fanapahan-kevitry ny Oniversitem-Pampianarana hanery ny fitsipika momba ny fitafiana ao amin'ny tobim-pampianarana – ary koa ilay antsoina hoe zipolava ao amin'ny sekoly fanabeazana fototra sy ambaratonga faharoa dia manana ny fiaviany tamin'ny fanarahana ara-bakiteny ny fampianarana ara-tsosialy (pioritanisma) izay nampiavaka ny fiainana tamin'ny vanim-potoana sosialista tao Mozambika. Tamin'izany fotoana izany, tonga tamin'ny fetra tafahoatra izany. Tsy afaka mamerina ny nataon'ny pioritanisma 30 taona lasa ny fitsipiky ny Oniversitem-Pampianarana, saingy mila mitandrina isika. Maro ireo mizaka mafy ny vokany noho ireo fikasan'ny fanjakana hanaramaso ny tokony sy tsy tafian'ny olona. Tsy mankasitraka ny tsy fahamendrehana aho, saingy tiako ambonin'ny rehetra ny fahalalahana.
Nanome fijery mifanohitra i Titos Cau, manipika fa ny fanapahan-kevitry ny Oniversitem-Pampianarana dia mifototra amin'ny fomban-drazana ara-kolontsaina ary tokony hotohanana:
Araka ny fantatro, ny ilana fitsipika ara-pitafiana dia mifototra amin'ny fomban-drazana ara-kolontsaina, ara-panahy sy ara-tontolo (kosmolozika) Afrikanina nisy, fa tsy amin'ny zavatra niainana nandritra ny fitondrana sosialista taorian'ny fahaleovantena. Amin'ny fomban-drazantsika, masina ny lohaliky ny vehivavy ka tsy tokony aseho vahoaka. Zava-dehibe ny maha sarotiny amin'ny fomba fitafiana satria “milaza” ny maha antsika izany. Ny fitafiana dia fanampin'ny nofo manafy ny fanahintsika. Mety ny any filohan'ny Oniversitem-Pampianarana ka tokony hotohanana…
Fatima Mimbire dia mpikaroka ao amin'ny Foiben'ny Fahamarinam-bahoaka, vondrona mpanandra-teny miady amin'ny kolikoly, ary manohitra ilay fitsipika:
Ao no ilazan'izy ireo fa toeran'ny demaokrasia ny oniversite. Toeran'ny fifanakalozan-kevitra tsara indrindra izany…… raha manomboka manahy amin'ny fomba fitafin'ny olona isika, am-pahatsorana no ilazako fa very ny fifantohantsika na tsy manana zavatra lehibe kokoa ahiana isika. Milentika ny firenentsika noho ny ezaka «navandravandra» hanaisotra ny jiro kely ananantsika. Am-pahatsorana no ilazako fa mila rafitra vaovao isika.
Nametraka fanontaniana momba ireo fepetra ireo i Bitone Viage, mpamelabela-kevitra mianatra momba ny siansa ara-politika ao Brezila:
[…] Mihariihary fa amin'ny maha (UP), ivon-toerana mampiofana mpampianatra dia tsy maintsy voaantoka fa mitarika ny tenan'izy ireo amin'ny fitondran-tena ara-maoraly sy amin'ny fomba kanto ekena ao amin'ny fiarahamonintsika ny mpampiofana sy ny mpiofana ao amin'ity ivon-toerana ity.
Saingy ny fanontaniana tsy azo ampanginina dia hoe, inona ny lanjan'ny fahalalana onony raha tsy misy vokany sy fanatsofohana. Inona ny lanjan'ny fanananana mpampianatra tsara fomba fitafy, kanefa toa miha-mitombo ny tahan'ny fampianarana ratsy kalitao?
Tamin'ny fanehoany hevitra mikasika ny lohahevitra, nahita i Edson Agostinho Sangue Sangue fa tahaka ny toerana hifanojoan'ny zava-misy ara-kolontsaina maro ny oniversite, ary tsy tokony hanery fenitra tahaka izany:
Raha misy olona miditra amin'ny fampianarana ambony, hita ho olona efa mahafantatra izy ireo fa hitondra fiantrakany haingana ny fitondratenan'izy ireo, na fiantraikany ratsy izany na tsara. Ny oniverisite, raha ny marina dia ranomasina ahitana kolontsaina marobe, ary samy manana ny fanabeazany, ny fitsipikany, ny kolontsainy, ny fomban-drazany ny tsirairay. Ny oniversite dia toerana hamolavolana ny fomba fiheverana, saina kinga ary iray amin'ny toetran'olona marani-tsaina ny fomba fandraisanao ny hafa tsy manaja ny endrika isehoany ivelany na ny fomban'izy ireo. Tsy manavakavaka ny olona marani-tsaina….